Xaaf oo uga digay dowladda federaalka faragalin ay ku sameyso maamulka Galmudug | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xaaf oo uga digay dowladda federaalka faragalin ay ku sameyso maamulka Galmudug
Xaaf oo uga digay dowladda federaalka faragalin ay ku sameyso maamulka Galmudug
Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Dhusa-mareeb ayaa sheegay in ay dowladda federaalka uu uga digayo in ay soo faragaliso arrimaha Galmudug.
Wuxuu sheegay Galmudug iyo Ahlu Sunna hal maamul kaliya isku yihiin, isaga oo intaa ku darray in uu saxayo hadalkii ka soo yeeray Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka.
‘’Galmudug iyo Ahlu Sunna ma nihin, annaga hadda Galmudug baan isku nahay nahay -waa run waan wada aragnay Wasiirka Aarrimaha Gudaha, Labo maalmood kaddib ayaan ballannay, walina war naguma soo celin, annaguna waan iska soo dhoofney .” ayuu yiri madaxweynaha Galmudug oo inta ku daray “ ayuu yiri Xaaf.
Wuxuu sheegay in ka hadalka arrimaha Galmudug ee Wasiirka arrimaha gudaha dhinacooda u arkayaan faragalin dowladda federaalka ay ku heyso sida uu hadalka u yiri Galmudug.
Khilaafka Galmudug ayaa hadda u muuqda mid meel sare gaaray, waxaana ay dowladda federaalku baaqday in ilaa 30ka bishan kulan isugu yimaadaan dhinacyada uu khilaafku u dhaxeeyo, kaa oo ka dhacaya magaalada Muqdisho.